AMAKHITSHI ANGAMA-45 ENTOFONTOFO ANEEKHABHATHI EZIMHLOPHE (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Amakhitshi angama-45 eNtofontofo aneeKhabhathi eziMhlophe (Isikhokelo sokugqibela)
Amakhitshi angama-45 eNtofontofo aneeKhabhathi eziMhlophe (Isikhokelo sokugqibela)
Iikhitshi ezineekhabhathi ezimhlophe zifunwa kakhulu ngenxa yobuhle bazo obungapheliyo kunye nobuchule bokubhangqa nemveli, ilizwe, ixesha langoku, iYurophu, okanye izimbo zangoku. Ikhabhathi emhlophe iyahambelana nayo yonke imibala isenza ukuba kube lula ukutshatisa izixhobo zakho zasekhitshini, iziqithi, kunye nokubuyela umva ukuze ubenomtsalane. Apha ngezantsi kukho ingqokelela yeekhitshi ezimhlophe zekhabinethi ezimnandi zoyilo kunye nokuphefumlelwa.
Eli khitshi libukekayo kulo mfanekiso ungentla limile kakuhle ngokuchasene nomgangatho omnyama we-wengue osetyenziswe kwindawo yonke. Umahluko ocacileyo phakathi kwezi zimbini zigqibeleleyo unika inkangeleko enesibindi esithubeni, kwaye ungabi namandla omnye komnye ngexesha elinye. Ikhitshi linesikimu sombala esimhlophe esimhlophe, sisebenzisa iikhabhathi zasekhitshini eziphefumlelweyo zaseFrance, ikhawuntala emhlophe yemarble phezulu kunye neethayile ezimhlophe kunye nesilivere zemayile yesilfplash.
Iikhabhathi eziMhlophe eziKhitshini
Iikhabhathi eziMhlophe eziXinekileyo
Iikhabhathi eziMhlophe zeKhitshi ezinemigangatho emnyama
Iikhabhathi eziMhlophe eziShaker eziMhlophe
Iikhitshi zangoku kunye neeKhabhathi eziMhlophe
Imibala yeKhitshi yepeyinti eneeKhabhathi eziMhlophe
Iikhitshi iBacksplash Iingcamango ngeeKhabhinethi eziMhlophe
Uyilo lweKhitshi lokubuyela umva kwiikhabhathi eziMhlophe
Nguwuphi uMbala weKhompyuter kwiikhabhathi eziMhlophe zeKhitshi
Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zikhethwa ngokubanzi ngabanini bamakhaya abaninzi ngenxa yokukhanya, umoya opholileyo kunye nendawo ebanzi evakalayo uyinika ikhaya lakho. Ibonakaliswa ngobuhle obungenakulinganiswa kunye nokuguquguquka njengoko kungenakuphelelwa lixesha.
Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zinokudityaniswa nayo nayiphi na imiphezulu yeetafile esukela kwinto engathathi cala ukuya kwiitoni ezimnyama okanye imibala eqinileyo. Ikwafanela naluphi na udonga kunye nokugqiba komgangatho okanye izinto. Ngeekhitshi ezimhlophe zasekhitshini, ukufezekisa uhlobo oluthile loyilo nayo ayongxaki kuba isebenza kakuhle nazo zonke iikhonsepthi nokuba zinokuba zezodidi, zemveli, ezirhabaxa, ezangoku okanye zangoku. (Ndwendwela eli phepha ukuze ubone igalari yethu Izitayile zekhabhinethi yasekhitshini ukufumana ezinye izimvo)
Ngokuchasene nenkolelo yokuba umhlophe ucace gca okanye uyadika, eneneni ibonelela ngendawo yokuvavanywa njengoko isebenza njenge-canvass engenanto ebonelela ngamathuba angenasiphelo ngokweeesthetics ezibonakalayo.
Ungalitshintsha njani igama ecarlifonia
Ukuthintela ukubonakala okungenabomi kunye nokubuthuntu, isikhokelo esinye esingundoqo esinokuqwalaselwa ekusebenzeni nekhabhathi ezimhlophe ekhitshini lakho kukwenza umahluko kubume bezinto, izixhobo kunye nokugqitywa. Ngale ndlela ubunzulu, ubukhulu kunye nokwahluka kusadaliwe nokuba uthatha isigqibo sokufezekisa ukujonga konke okumhlophe kwindlu yakho. Umhlophe uza neetoni ezininzi ukuze uzame ukusebenza ngee-shades ezahlukileyo ukusuka kwelona mhlophe liqaqambileyo ukuya kwelicwecwe elimhlophe ngakumbi okanye elimhlophe.
Umsebenzi wesigidi kunye nesitayile sekhabhathi yinto ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele xa usebenza ngeekhabhathi ezimhlophe zekhitshi. Ukwenza uyilo lwekhitshi lakho lihambelane ngakumbi nembonakalo yendlu yakho, naka iinkcukacha ezincinci kwaye ungoyiki ukuchitha kwimillwork. Ukongezwa kokubumba okuhombisayo kunye neepaneli eziphakanyisiweyo kwiikhabhathi ezimhlophe, umzekelo, zibenza zilungele ngakumbi isitayile sendabuko. Iphaneli ethe tyaba ethe tyaba, kwelinye icala, ilunge ngakumbi kuseto lwangoku okanye lwangoku.
Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zibonelela ngakumbi kwigumbi lokongeza ukutshiza kombala kwigumbi ukwenza umahluko ngakumbi. Yongeza ubomi ekhitshini lakho usebenzisa umbala othile we-aksenti kwizixhobo zakho, izixhobo ezincinanana okanye ogqityiweyo okhethekileyo. Enye yezona ndlela zixhaphakileyo zokufezekisa oku kukusebenzisa into ebonakalayo yokubeka umgangatho.
Zama ipateni yomgangatho onomdla wokubeka ukuba usebenzisa iithayile zeceramic okanye ukhethe iplanga lomgangatho owenziwe ngokukhethekileyo. Ngaphandle kwezi zinto, igranite, ilitye lendalo okanye ikhonkrithi zezinye iindlela ezinokuthi zihlolwe njengezinto zokubekisa ekhitshini.
Ukwenza umahluko akukhawulelwanga koku kuphela njengoko unokusebenza ngeenkcukacha ezincinci ekhitshini. Khetha ukugqiba okunomdla kwiminyango yekhabhinethi kunye nokuphatha ukwenza umahluko obonakalayo. Musa ukoyika ukuzama imibala emitsha yezixhobo zasekhitshini. Izixhobo zensimbi ezingenasici, umzekelo, zihambelana ngokugqibeleleyo nekhabhathi ezimhlophe zasekhitshini kwimeko yanamhlanje.
Ukubuyela umva ekhitshini ikwayenye indlela yokongeza ubomi kwiikhabhathi ezimhlophe zekhitshi. Iithayile zikaMoses, ilitye lendalo kunye neglasi zibonelela ngokwahluka kubume kwaye zinokusebenza njengendawo enomdla ekujongeni ikhitshi eneekhabhathi ezimhlophe. Ukuba oku akuhambelani nokunambitha kwakho, ungenza kwangoko wenze umahluko ngokusebenzisa imiphezulu yeetafile enepateni eyahlukileyo yokuqaqamba okanye imibala yemibala.
Eli khitshi lihle lisebenzisa i-oki yetshokholethi emnyama ebhangqiwe kunye nekhabhathi emhlophe ekhitshini. Umthi osetyenzisiweyo kule ndawo, nangona kunjalo, unombala ophantsi obomvu ngakumbi, uwunika itinge encinci ye-purplish, enceda iikhabhathi ezimhlophe ukuba zime kakuhle kanye nasemgangathweni wengue. Iikhabhathi ziphefumlelwe ngokwakudala, ngeenkcukacha ezilula zokuhombisa kunye neminyango yeglasi yaseFrance yeekhabhathi ezingaphezulu. Isebenzisa islabha esityebileyo semabhile kunye neetayile ezimhlophe zangaphantsi kwendlela yokubuyela umva ekhitshini yesitayile esiguqukayo.
Imigangatho walnut yegolide ibonelela ngemvelaphi entle neneshushu kulo ndawo kwaye inika umahluko ocacileyo ngokuchasene nekhabhathi ezimhlophe zekhitshi. Ikhitshi lisebenzisa iikhabhathi zala maxesha zifakwe igranite emnyama kwizinto zokubala eziphambili kunye nemhlophe emhlophe emenyezelayo eCarlacatta Vagli kwisiqithi sasekhitshini. Ikwasebenzisa iithayile ezizodwa zokubuyela umva ezinesimbo esiliqili esenziwe ngesilivere esineenyawo, esidibanisa ipateni yentsimbi egqojiweyo yentsimbi yesibane sendawo yokutyela.
Ngokungafaniyo nemizekelo edlulileyo, eli khitshi liya kukhanya kwindibaniselwano yokukhanya, kusetyenziswa ukukhanya okusemgangathweni kweemephu zomthi ezidityaniswe nekhabhathi ezimhlophe zekhitshi. Umahluko ocekeceke kule khitshi ufumaneka kwisiqithi sekhitshi esekwe kumnatha kunye nomthi omnye oqinileyo womthi obaleka uphahla. Ikhitshi ngokwalo lilula kakhulu, kunye nekhabhathi ezimhlophe ezimhlophe, iiphaneli zeglasi kwiingcango zekhabhinethi ezingaphezulu, kunye neethayile ezimhlophe zikaloliwe ohamba ngaphantsi komhlaba ezidityaniswe ngetafile emhlophe emhlophe.
Ikhitshi elikhulu eligcweleyo elisebenzisa imigangatho emnyama emnyama ye-walnut enesiphetho esihle se-matte varnish, esinceda ukukhupha ubuhle obulula beekhabhathi ezimhlophe ezimhlophe. Iikhabhathi ezimhlophe ezihonjiswe ngeplanga zenza ukuba indawo ibonakale intsha kwaye icocekile, ngesitayile esihlala sihambelana iminyaka. Ukuchukumisa okuhle, i-carrara marble yayisetyenziselwa zonke iincopho zokubala, ezibhangqwe ngee-grey kunye namhlophe iithayile ezimabhele zokubuyela umva. Iziqithi ezibini zasekhitshini zibonelela ngendawo eninzi yokulungiselela ukutya kunye nokutya-ekutyeni.
Imigangatho ye-walnut yegolide kunye nokugqitywa kwe-matte varnish kugqibe ukongeza ukukhanya kwe-rustic kule khitshi yesitayile eqaqambileyo. Ngokungafaniyo nemizekelo yangaphambili esebenzisa i-beige, i-taupe okanye i-grey paint wall, esi sithuba simhlophe konke ngaphandle-kwangaphandle. Ithoni efudumeleyo nethulisiweyo yemigangatho iyanceda ukukhupha iikhabhathi ezimhlophe, kwaye iyenze ibonakale. Eli khitshi lisebenzisa ukubhangqwa kweklasi emhlophe emhlophe kunye neethayile ezimhlophe zendlela ehamba ngasemva.
Ikhitshi elincinci elisebenzisa indibaniselwano yomnyama nomhlophe yokugqibezela ngokungafaniyo. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zigqityiwe ngombala omhlophe, kuyilo olulula lwepaneli kunye noyilo lwentsimbi engenasici, ngelixa iikhabhathi zecala lokubonisa zigqityiwe ngombala omnyama. Kwiphepha lokubala, igranite emnyama nemhlophe yayisetyenziselwa isibheno esihle ngaphandle kokophula i-bhanki njengemabhile. I-backsplash isebenzisa indibaniselwano entle yeetayiti ezimhlophe zangaphantsi kwendlela kunye neepatheni zemayile yethayile, inceda ukukhulisa indawo yokupheka.
Eli khitshi linemvakalelo ye-retro kuyo ngenxa yombala kunye nokukhethwa kwefanitshala. Imigangatho mihle oki yegolide, yongeza ithoni efudumeleyo kuyo yonke indawo, ngelixa imibala eluhlaza enombala oluhlaza efumaneka kwizitulo kunye nezixhobo zongeza ithoni epholileyo epholileyo kwisithuba. Iikhabhathi yayizikhabhathi ezifakwe ipanele kuyo yonke imhlophe, ifakwe ilitye lesepha lokuhombisa kumphezulu othambileyo.
Imigangatho emikhulu ye-oki yegolide isete imigangatho efudumeleyo nethulisiweyo kweli khitshi, inceda iikhabhathi ezimhlophe zekhitshi. Iikhabhathi zimhlophe gca kunye neenkcukacha ezenziwe ngokulula, zineemabula ezintle kunye neenkozo / iipateni ezinemibala yekofu.
Le khitshi emhlophe yanamhlanje ine-rustic ngakumbi ngokudibanisa imibala kunye nokugqiba. Imigangatho ye-oki emnyama yenza iikhabhathi ezimhlophe zigqame, ngelixa iiplanga ezikwisilingi zanikwa imvakalelo yokuhlaziya ngepeyinti emhlophe. Eli khitshi lihlengahlengisa ubume obuvulekileyo, bohlula ikhitshi kuyo yonke indlu kunye nezinto zokubala zasekhitshini. Kwitafile, kusetyenziswe imarble eyahlukileyo eneenkozo zegolide ezifihlakeleyo, kongeza indawo efudumeleyo kwisithuba, kunye nokubuyela umva, kwasetyenziswa iithayile zemabhile zokugqiba.
Eli khitshi lincinci libonisa ukuphefumlelwa okuphakathi-mpuma kunye neepateni / imodeli, kodwa inesitayile sotshintsho esisetyenziswe kwindawo yonke. Iindonga umbala okhanyayo okhanyayo, ukongeza umahluko ocekeceke, ngelixa imigangatho emnyama iithayile zeceramic, inceda ikhitshi elimhlophe ukuba liphume. Ukucoceka, ukujonga okukhanyayo, indawo emhlophe eqinileyo isetyenzisiwe kwaye yadityaniswa neethayile zangasemva ezinemodeli eyahlukileyo yenyawo.
Iindonga eziluhlaza zogwebu loLwandle zibeka imvelaphi epholileyo kunye nehlaziyayo kule ndawo incinci yekhitshi. Yonke imibala emhlophe yekhitshi iyanceda ukuba ibonakale ikhanya kwaye iphangalele ngaphandle kwendawo encinci. Itshintshela isitayile sendabuko iikhabhathi zasekhitshini ezidityaniswe ngemabhile emhlophe nengqolowa yegolide, kunye neethayile ezimhlophe zikaloliwe ohamba phantsi komhlaba kwi-backsplash.
Enye ikhitshi yesiko lendabuko esebenzisa iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe-emhlophe ukuyinika ukucoceka nokukhanya okukhanyayo, ukuyinceda ukudibanisa kunye neziqwenga zefenitshala zangoku. Isilayidi esityebileyo segranite eluhlaza-incamathele kunceda ekugxininiseni inkangeleko yayo yemveli, kodwa iprofayile yayo ethe tyaba iyigcina ikhangeleka ilula kwaye yanamhlanje
Imigangatho yeplanga ye-oki yephondo yongeza ukujonga okuhle kokuyilwa kwekhitshi, ukongeza ukukhanya okufudumeleyo kwindawo. Iikhabhathi zekhitshi zilungelelanisa isitayile se-neo-classic, zisebenzisa iimodeli zodidi kunye nekhabhathi yendlela yesiFrentshi ngaphezulu. Izinto zokubala ze-quartz ezimnyama zinika umahluko omnandi ngokuchasene neekhawuntari ezimhlophe zekhabinethi, enceda ekwenzeni ukugqitywa okumnyama okumnyama komdlalo wesiqithi sekhitshi ngokubonakala kwayo konke ekhitshini.
Eli khitshi lincinci lilungisa isitayile sephondo laseFrance, lisebenzisa yonke imhlophe kuzo zombini iikhabhathi kunye nomphezulu ngokubanzi. Ngaphandle kobukhulu obuncinci, ubeko olwahlukileyo luyakwazi ukwandisa indawo ekhoyo, ukubonelela ngendawo yokusebenza eyaneleyo, kunye nebala lokutya kwindawo yokutyela. Ikhawuntara emnyama yegranite yongeza ukuchukumisa kokungafaniyo nayo yonke indawo emhlophe, ngelixa isofe coffer kunye ne-classic motifs zongeza ubume kunye nephethini.
Iikhitshi ezineekhabhathi ezimhlophe ezinesitayile se-antique kunye nokugqiba zinokunika indawo yakho imvakalelo yesiko ngakumbi. Kulabo bafuna ubushushu obufudumeleyo nobumema iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe zantlandlolo zininzi iindlela zokufezekisa inkangeleko oyifunayo.
Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ezimhlophe zisebenza kakuhle kumakhaya emveli. Nangona iklasikhi, esi sitayile sekhitshi lasekhitshini khange sibonakale sinomhla. Oku kuhlala kuza nge-beige e-creamy, emhlophe okanye ekubandezelekeni okumhlophe. Kulabo bafuna ukufezekisa i-vibe ephawuleka ngakumbi, ukugqitywa kwe-faux eqhekekileyo ikwafumaneka ukulinganisa ukujonga okudala. Esi siphelo sihlala sidityaniswa noyilo lobuso bekhabhathi okanye isithsaba sokuhombisa. Kuba ikwacocwa kwaye yagcwala, iikhabhathi ezimhlophe ze-antique kulula ukuzicoca endaweni yeekhabhathi ezimhlophe zekhitshi.
Imigangatho ye-oki yegolide iseti imvakalelo ye-antique kolu loyilo lwasekhitshini lumhlophe, oluhambelana ngokuchanekileyo neethayile zedayimane ezisetyenziselwa ukubuyela umva ekhitshini. Iikhabhathi zesiko zesintu ezipeyintwe ngombala omhlophe zisetyenzisiwe, zidityaniswe nesiseko sokugqibela se-walnut kwikhawuntara enkulu yesiqithi sekhitshi. Zonke imiphezulu yeetafile zisebenzisa igranite emhlophe, ukuze acoceke kwaye ujonge indawo ekhanyayo.
Imigangatho ye-Ebony yenza ikhitshi libukeke ngathi liyadada, ngelixa iindonga ezinombala wemostade zongeza ithoni yegolide efudumeleyo ekhitshini. Iikhabhathi zasekhitshini zinempembelelo yakudala yeGothic, eneenkcukacha zepaneli ezintsonkothileyo kunye neeGothic Arches kwiikhabhathi ezingaphezulu. Elinye ikhitshi liguqula isitayile sotshintsho lwangoku, njengeethayile ezimhlophe zangaphantsi ezisetyenziswa kwi-backsplash kunye nezibane zentsimbi ezingenasici ngaphandle kwesiqithi sasekhitshini.
Eli khitshi lidibanisa izinto zemveli kunye nezinto zangoku ukufezekisa oku kujongeka. Ubeko lwayo oluvulekileyo luyanceda ukuba lubonakale lomoya ngakumbi kwaye lubanzi, ngelixa iikhabhathi zaso zasekhitshini ezimhlophe ezingasasebenziyo zinika isibheno esihle sodidi. Izinto zokubala eziphambili zisebenzisa izixhobo zokubala zegranite eluhlaza kunye neetayile zemibala eluhlaza ezingwevu ezinomda oluhlaza ukuze zilingane nomphezulu wekhawuntara, ngelixa isiqithi esifana nesasekhitshini sikhetha indawo ephezulu yanamhlanje, emnyama emnyama, enamacala ajikeleziweyo.
I-Beige okanye icinyiwe emhlophe yenye indlela elungileyo emhlophe. Lo mbala ongathathi hlangothi unokusetyenziswa njengenye indawo ngabanini bamakhaya abafumana abamhlophe buthuntu okanye bajonge ngokucacileyo. Xa kuthelekiswa nombala oqaqambileyo kunye nombala oqaqambileyo wekhabhathi ezimhlophe, i-beige okanye umbala omhlophe ucocekile ngakumbi kwaye unombala omthubi kancinci onika ibhalansi elungileyo ye-hue epholileyo kunye ne-mellow hint yelizwi eliphantsi elifudumeleyo.
Iikhabhathi ezimhlophe kunye nezimhlophe zihlala zinika indawo indawo entle ngakumbi, ezenza iindwendwe ziziva zisekhaya kwaye zamkelwe. Kuba ikwangumbala okhanyayo, ukucima iikhabhathi ezimhlophe okanye ze-beige nako kwenza ingcinga yendawo eyongeziweyo, isenza ikhitshi elincinci libonakale likhulu kwaye liqaqambile.
Njengamhlophe, iikhabhathi ezimhlophe okanye ze-beige zinokudityaniswa nawo nawuphi na umbala. Nangona iikhabhathi ezimhlophe zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwiikhitshi zakudala nezesintu, lo mbala wekhabhathi ugcwalisa iindlela ezahlukeneyo zoyilo, nokuba zindala, ilizwe lakudala, utshintsho, okwangoku okanye lwanamhlanje.
Xa kuziwa ekumataniseni nezinto zokuhombisa okanye zokubala, iikhabhathi ezimhlophe nezimhlophe nazo zibonelela ngokuguquguquka kunye nokuguquguquka. Isebenza kakuhle kunye neetafile zokukhanya kunye nobumnyama, kodwa ikhupha ubuhle xa idityaniswe nelitye elililo lendalo. Ukudityaniswa kunye nokusika okufanelekileyo kunye nezinto zokwenza umgangatho, iikhabhathi ezimhlophe okanye ezimnyama zekhitshi zinokusetyenziselwa ukwenza indlu entle yasefama, yendlu kunye nekhitshi eliphefumlelweyo lelizwe.
Ukucima iikhabhathi ezimhlophe ezidityaniswe nezixhobo zokubala ze-emerald eziluhlaza zinika eli khitshi ilizwe eliqhelekileyo. Iikhabhathi ezisisiseko zenza umahluko ocekeceke xa ubhangqiwe ngumgangatho wepine, ukongeza ithoni efudumeleyo ethambileyo ekhitshini.
Ukubandezeleka luhlobo lwefeksi yokugqiba ubuchule obongezwa kwiikhabhathi zasekhitshini okanye kwizixhobo zefanitshala ukubanika ukubonwa okugugileyo okanye okugugileyo. Oku kukwasetyenziselwa ukunika iikhabhathi imvakalelo ye-antique okanye i-rustic kunye ne-back vibe. Oku kuhlala kusetyenziswa ekhitshini enesitayile sendabuko, ilizwe liphefumlelwe okanye livakalelwa lihlabathi elidala.
Ukugqitywa koxinzelelo kunokufezekiswa kusetyenziswa izinto ezilula kunye ne-antiquing glaze esele ilungile. Oku kunokwenziwa njengoko uzenzele ngokwakho iprojekthi. Nangona kunjalo, iikhabhathi zasekhitshini ezixinzezelekileyo zinokuodolwa kubathengisi. Le nkqubo ihlala ibandakanya isanti eninzi ukufumana ukubonakala okuguqulweyo kunye nokuguga nokubonakala.
Iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe ezibandezelekileyo zinokufezekiswa ngamanyathelo alula. Izinto ezifunekayo kule projekthi zibandakanya amadlavu omqhaphu agudileyo, i-sandpaper okanye iibhloko zesanti (sebenzisa i-sandpaper engama-80), iibrashi zepeyinti kunye neeroller. Ipeyinti okanye ukugqitywa okusetyenzisiweyo yipeyinti emhlophe ye-latex, i-acrylic glaze, i-antiquing glaze okanye i-pigment glaze. Ukuba ufuna ukugqitywa okungakhazimli okanye okungaginyisi mathe, ungasebenzisa kwakhona ukungatyheli, ukutyabeka kwe-matte polyurethane.
Isinyathelo sokuqala esibandakanyekayo ekudaleni ukugqitywa okumhlophe kukucwangcisa iikhabhinethi zakho ngomsebenzi ngokususa izibambo, amaqhina kunye nokutsala. Ungasusa neengcango zekhabhathi ukuba ukwenza oku kugqibe ikhitshi esele ikhoyo ukwenza umsebenzi ube lula. Nika ikhuselo ukhuselo kwiindonga zakho nakwiitafile usebenzisa iteyiphu yomzobi kunye nephepha leplastiki.
Emva koko, qiniseka ukuba iikhabhathi zakho zicocekile. Sula konke ukungcola komhlaba usebenzisa i-rag efumileyo kwaye wome. Ungasebenzisa isepha ethambileyo okanye isepha yokuhambisa isitya kunye nesisombululo samanzi ukususa konke ukungcola. Ngokungafaniyo nokupeyinta okuqhelekileyo okanye ukulungisa kwakhona apho kufuneka ucokise yonke indawo ngaphambi kokufaka isicelo sakho osikhethileyo, kwisiphelo esimhlophe esikhathazekileyo, ungashiya imo okanye umonakalo omncinci kwiikhabhathi ngaphambi kokuba uqale njengoko bongeza umtsalane kwaye benze ukugqibezela ngakumbi ukujonga kwendalo.
Isinyathelo esilandelayo kubandakanya ukucoca iikhabhathi zakho usebenzisa isandpaper okanye ibhloko yesanti. Yeka xa iinkuni phantsi kwepeyinti sele zibonakalisiwe. Ukuze i-glaze entsha ye-antiquing ihambelane nomphezulu wekhabhathi zakho kufuneka kugqitywe kugqitywe kwangoko. Kwakhona, kufuneka usule lonke uthuli usebenzisa i-rag ecocekileyo.
Nje ukuba iikhabhathi zicoceke kwaye zomile, ungafaka isicelo sokuqala kwimpahla yakho kwiikhabhathi zakho usebenzisa ibrashi yepeyinti okanye ibrashi yokuhambisa. Kwiikhabhathi zeenkuni eziqinileyo, sebenzisa i-primer esemgangathweni, ngelixa ukucoca ukukhanya okuphezulu okanye indawo ecwebezelayo enjengekhabhathi ebonakalayo, sebenzisa uhlobo olufanelekileyo lokuqala. Vumela i-primer yome. Kanye, kufuneka ucofe iikhabhathi kwakhona kwaye ucoce naluphi na uthuli.
Emva koko, umbala osisiseko weekhabhathi zakho ngoku ungongezwa. Sebenzisa ipeyinti emhlophe yelatex njengengubo yesiseko kwaye uyisebenzise kwiikhabhathi zakho usebenzisa isiqwenga selaphu, endaweni yebrashi yokupeyinta. Yenza oku ngokuhamba kwesetyhula. Le nkqubo yenziwa ukufezekisa ukubonakala okubandezelekileyo. Iidyasi ezimbini ziyafuneka - enye ifakwe emva kokuba enye yome ngokupheleleyo. Ukuba umbala wekhabhathi wakho wokuqala sele umhlophe, ungatsiba eli nyathelo.
Iikona, imiphetho, imingxunya kunye nokubumba kweekhabhathi zinokufakwa kwisanti ukuzigcina zimnyama ngakumbi. Ukuba ufuna ukongeza ezinye iinkcukacha, i-chisel inokusetyenziselwa ukwenza iichips. Unokufumana uyilo ngakumbi ekufezekiseni ukujongeka okuxinzezelekileyo ngokusebenzisa isando ukufumana imivalo, nangona kunjalo ezi nkcukacha zokugqiba zihlala zisisigxina ngokuthelekiswa nesanti. Kunzima ukubuyisa umva ukuze uqiniseke ukuba esi sisiphumo kanye ofuna ukusiphumeza ngaphambi kokwenza njalo. Le ndlela yokwenza iikhabhathi ezixinzelelekileyo ikwasebenza kuphela xa isetyenziselwa iikhabhathi zomthi eziqinileyo.
Isinyathelo esilandelayo siquka ukusetyenziswa kwe-antiquing glaze okanye i-acrylic glaze. I-glaze ihlala ixutywe nepunipoon yombala wakho osisiseko, kule meko imhlophe. Ukuba ujonge ukujonga okufudumeleyo, yongeza umbala wokuthinta otyheli okanye umbala ocher. Umber unokongezwa ukuba ufuna ukufezekisa i-gray cast kwiikhabhathi zakho ezimhlophe.
Faka isicelo se-glaze kwikhabhinethi usebenzisa ibrashi yokupenda. Ngenye indlela, ungasebenzisa ilaphu ukuba ufuna ukugqibezela ngokugqibeleleyo. I-glaze kufuneka ivunyelwe ukuba ihlale emhlabeni kangangesibini semizuzwana emva koko ukugqithisa kususwe kwangoko kusetyenziswa irag. Le nkqubo idala ukubonakala okune-streaky kunye ne-antique.
Vumela ukuba yome okungenani imizuzu elishumi. Ukuba ufuna ukugqiba ukuba uxinzeleleke ngakumbi, ungasebenzisa uboya bentsimbi. Isandl phakathi kweebhatyi ziya kukuvumela ukuba ufezekise ukugqibelela. I-glaze kufuneka isetyenziswe ngokulinganayo kodwa ijolise ngakumbi kwiindawo ezigugileyo. Vumela ixesha elaneleyo lokomisa. Oku kuhlala kuthatha iiyure ezingama-24 ukunyanga ngokupheleleyo.
Emva kokumisa, ingubo ephezulu ngoku inokusetyenziswa. Idyasi ephezulu inokuthi igqibe matte polyurethane ukukunika iikhabhathi ukujonga okugcweleyo kokugqibela. Oku kusebenza njengesigqubuthelo sokhuselo lweekhabhathi ezixinzezelekileyo. Nje ukuba wome ngokupheleleyo, ngoku ungafaka izixhobo zecango lekhabhinethi njengokutsala okanye amaqhina. Ngokubanzi, ukugqitywa kokubandezeleka kukulungisa ngokukhawuleza kwaye kulula ukwenza iikhabhinethi zakho ziphume kunye nesibheno se-antique esingenasiphelo.
Kukho into enomdla malunga nekhabhathi emhlophe yekhitshi enemigangatho emnyama. Iikhikhini ezimhlophe zinokubonakala zihlanjwe ngaphandle kwaye zingenantlukwano. Ngokudityaniswa komgangatho omnyama osisityebi ungongeza umdla kunye nobuntu kwisithuba.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, eyona ndlela ixhaphakileyo yokwenza ubunzulu kunye nokwahluka ekhitshini kunye neekhabhathi ezimhlophe kukubhangqa kunye nezinto ezinomgangatho omnandi. Iiplanga zomthi ngombala omnyama zibonelela ngokumangalisayo, ngokucocekileyo kunye nokuziva usekhaya ekhitshini lakho. Yongeza kwixesha elingenasiphelo, i-classic flair kwaye inika ukufudumala kwindawo.
Imigangatho emnyama ayikhawulelwanga kwiiplanga ezenziwe ngomthi kuphela njengoko kukho ezinye izinto zokwakha ezifumaneka kwimarike. Iithayile zeCeramic ziza kwindawo ebanzi yoyilo kunye neepateni. Iithayile zeGranite kunye nezemarble zikwanemilinganiselo eyahlukeneyo yokuhombisa kunye nemibala esebenza kakuhle ngesimbo sobukhazikhazi bendabuko. Kodwa kwabo banolingo ngakumbi, imigangatho yekhonkrithi yenza isiphumo esibuhlungu kwiikhitshi ezinamashishini.
Ubungangamsha obuqhelekileyo bubonakalisiwe kolu luyilo lwasekhitshini, lubonisa ukudityaniswa kwemibala kunye nokugqitywa okuphuma kubunewunewu kunye nokulula kwale mihla. Ngelixa iikhabhathi eziphambili zekhitshi zimhlophe qwa, isiqithi sasekhitshini sinomphetho omnyama obomvu. Zombini zigqitywe ngegranite ekhanyayo kwaye zidityaniswe ngeethayile ezimhlophe nezesilivere zemayile yokubuyela umva. Ikwasebenzisa isitayile esihle saseGeorgia esinezixhobo ezenziwe ngombala otyheli velvet kunye nesakhelo somthi esimhlophe.
Iindonga zegreymetal grey kunye nomgangatho omnyama womthi we-mahogany wenza ubumnyama kunye nobudoda vibe kweli khitshi. Ukumelana nale nto, endaweni yento emhlophe tyaba, ipeyinti emhlophe / cream yasetyenziselwa ukugqiba iikhabhathi zesitayile sendabuko kwaye zidityaniswe negranite egolide emthubi. Oku kudala ibhalansi elungileyo yeetoni ezipholileyo kunye nezifudumeleyo, ukudala indawo yanamhlanje kunye nenhle yekhitshi.
Umgangatho weRedwood unika imvakalelo efudumeleyo kwisithuba, isibini esineefestile ezinkulu ezijikeleze udonga lwangaphandle lonke, esenza ukuba indawo ibonakale ikhanya. Ngenxa yokuba iziseko ezisisiseko njengokugaya kunye nophahla sele zisebenzisa ezimhlophe, iikhabhathi zekhitshi zagqitywa ngombala okhanyayo / umbala omhlophe ukuyinika iintlobo ezahlukeneyo, kwaye i-countertop isebenzisa igranite emnyama emnyama. Isiqithi sekhitshi sineminyango enesitayile sebhedi esinika ukubonwa okuhle kwesitayile kunye nembonakalo yesiko.
Le khitshi ine-rustic vibe engathathi hlangothi, njengoko isebenzisa i-ash wood phantsi, idala ithoni engathathi hlangothi kule ndawo evulekileyo yekhitshi. Ikhitshi limi kwindawo efikeleleke ngqo kwindawo yokutyela nakwindawo yokuhlala, liyenza ibonakale iphangalele kwaye ikhanya. Iindonga zokukhanya ezikhanyayo yimvelaphi engathathi hlangothi ejongeka ilungile ngomgangatho we-ashwood, ngelixa ikhitshi ligcina ukubukeka okulula okumhlophe kuzo zonke iikhabhathi ezimhlophe kunye nokubala kweemarble.
Le khitshi encinci yegalari ithatha ugqozi lwayo kumbala oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe wase China, etshintsha imibala. Zonke iikhabhathi zasekhitshini zimhlophe ngombala omhlophe weemabhile, ngelixa isiqithi sasekhitshini sisixhobo esihambisekayo esenziwe ngomphunga ekupheleni kwekhitshi yikhabhathi ekhethekileyo yasechina eyayipeyintwe ngomthunzi oqaqambileyo oluhlaza okwesibhakabhaka, okhumbuza imizobo / iipateni i-china eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe. Iikhikhini ezimhlophe iikhabhathi zenza umahluko omnandi kumgangatho omnyama weenkuni.
Iikhabhathi ezimhlophe ezi-shaker aziphelelwa lixesha kwaye lukhetho olukhulu kwabo bafuna uyilo oluqhelekileyo oluchanekileyo kunye nokuncoma phantse nayiphi na ikhitshi.
Isitayile se-Shaker isitayile sekhabhathi esiqukethe ucango lwesiqwenga esi-5 kunye nepaneli yeziko elihlaziyiweyo. Yeyona ndlela iqhelekileyo yekhabhinethi yanamhlanje ebonakaliswa ziimpawu zobuhle ezilula nezisebenzayo. Ngaphandle kokuba nemvelaphi yemveli, isitayile esijijekayo siqhele ukusetyenziswa kwiikhitshi zangoku nezexesha langoku ngenxa yemigca yaso ecocekileyo.
Iikhabhathi ezimhlophe ezimhlophe ezihonjiswe ngemigangatho ye-mahogany kunye neendonga ezimthubi ezimthubi zenza umbala ongathandekiyo nothambileyo wale khitshi. Ukudityaniswa kwemibala kunye nokugqitywa kuzisa ukukhanya okufudumeleyo okushushu okuqaqambisa igumbi. Uyilo lusebenzisa iithayile zemibala eyahlukileyo kwi-backsplash ene-beige encinci kunye negolide ephantsi, ukongeza ubume obuhle ngaphezulu. Isiqithi sekhitshi eshukumayo sisebenzisa i-mahogany eqinileyo kwindawo yaso eseleyo, ngokuchaseneyo nemabhile esetyenziswa kwiikhawuntari eziphambili. Izitulo zebartan ezilukiweyo zongeza ukukhanya kwilizwe elinobuqhetseba kwindawo.
Iikhitshi ezineekhabhathi ezimhlophe zilula kwaye ziyaqaqamba zibanika imeko ekhangayo efunwa kakhulu ngabathengi abaninzi basekhaya. Kulo mfanekiso ungasentla iikhabhathi ezimhlophe ezigungxulweyo zidityaniswe nomgangatho wokhuni lomlotha ukunika le ndawo yekhitshi ithoni engathathi hlangothi. Umgangatho wokhuni uyanceda ukuba ufezekise i-rustic vibe efihlakeleyo. Ikhitshi elimile U lisebenzisa indibaniselwano yeklasikhi emhlophe emhlophe kunye neethayile ezimhlophe zokubuyela umva, kodwa yintoni eyenza le khitshi ibe yindawo eyodwa yokutyela ebekwe embindini wekhitshi.
Umgangatho weenkuni zegolide walnut unika ukujonga okudala okudala kule ndawo yekhitshi yotshintsho. Inobume obungafaniyo nobunamandla obukwaziyo ukwandisa indawo yenguqu phakathi kweendawo zokuhlala ezisemthethweni kunye neendawo zabucala zekhaya, ngaphandle kokuchaphazela ukuhamba kwezithuthi. Iindonga zazipeyintwe ngombala oluhlaza oqaqambileyo, nto leyo eyahluke keleyo kumgangatho ofudumeleyo weplanga. Kwimpahla yasetafeni, kwasetyenziselwa igranite emnyama kwisiqithi sekhitshi nakwibhawuntara yebar, kunye nemabhile emhlophe kwindawo ephezulu yekhawuntara.
Uhlobo lwangoku lwekhitshi ngokubhekisele kwimo yangoku yokubonisa imeko ebonakaliswa kukuncinci. Ihlala ilandela iskim se-monochromatic kwaye iikhabhathi ezimhlophe lukhetho oluthandwayo lolu hlobo loyilo.
Iikhabhathi zekhitshi zangoku zinemigca ecocekileyo, egudileyo kunye nendawo ethe tyaba engenanto yokuhombisa. Akukho zixhobo zokuhombisa ezinje ngokubumba kwesithsaba kunye neepaneli eziphakanyisiweyo. Kwizixhobo zehardware, izibambo zekhabinethi kunye neenqwanqwa zedrowa zilula kwaye azinazimpawu zokuhombisa.
Uhlobo lwekhitshi lwangoku lusebenzisa izinto ezixubekileyo ezinje ngesinyithi, ikhonkrithi, iplastiki kunye neglasi. Oku kudala umahluko ofunekayo kubume bokuthelekisa iikhabhathi ezimhlophe zekhitshi. Ilitye, i-veneer yeplanga okanye ii-laminates zinokufakwa kuyilo lwekhitshi ukongeza ubunzulu kuyilo.
Le khitshi yesimanje yendlela yokupheka isebenzisa imigca elula elula kunye nee-silhouettes, ukudala ukucoceka okucocekileyo kunye nokuhluza okufanelekileyo kwisitayile sangaphakathi sokwakha. Ikhitshi lisebenzisa ii-laminates ezimhlophe eziphazimlayo kwiikhabhathi zohlobo lwaseYurophu zokuziva zinamhlanje, ngelixa ilitye lemabula leCarrara elisetyenziswe kwiitafile, umva kunye nakwicala lesiqithi sekhitshi linika indawo yakudala ngelixa ligcina ifom yayo yanamhlanje.
Indawo yanamhlanje yekhitshi yotshintsho ethatha ugqozi kwiikhitshi ezimhlophe zesitayile saseFransi kodwa isebenzisa imigca ethe nca, ecocekileyo, isenza umfanekiso wesimanje. Imigangatho emnyama iMahogany enesiphelo esihle sematte, isinika umahluko omnandi. Amakhitshi ane-design elula yepaneli, ene-slab enqabileyo yelitye elimhlophe. Kwi-backsplash, iithayile ze-mosaic ezinombala omdaka we-brown, beige kunye nomhlophe zisetyenzisiwe, ukongeza iphethini ethe tyaba kunye nokuthungwa kumphezulu ohambelana kakuhle nombala womgangatho. Eli khitshi lineziqithi ezibini zekhitshi, esinye sazo sasilungiswe ngesinki, kwaye enye ubukhulu becala yindawo ethe tyaba esetyenziswa njengendawo eyongezelelweyo yokulungiselela.
Lo mgaqo uvulekileyo uyilo olumnyama nolumhlophe lwekhitshi lubonisa ikhabhathi emhlophe enee-countertops ezimnyama ezigudileyo. Uyilo lotshintsho luhamba luye kwindawo yokutyela ehambelana nomxholo opheleleyo wegumbi loyilo lobugcisa. Ikhitshi linesiqithi esikhulu sendawo enomsebenzi wokuhombisa ngomthi kunye nesinki eyakhelweyo. Ukukhanya kwesibane seglasi kunye nesibane sesibane sanamhlanje zibonelela ngezi zinto zala maxesha kule ndlela isiko lendawo yasekhitshini.
IGlam iyahlangana kule mihla kuyilo olubanzi lwekhitshi emhlophe, Elinye icala lodonga lizinikele kugcino olupheleleyo kunye neenqaba ezakhelwe-ngaphakathi, ngelixa olunye udonga lolwekhitshi elisisiseko lekhitshi elinemabhile emhlophe. Embindini sisiqithi esikhulu sekhitshi esineglasi ephezulu, esinika isibheno sanamhlanje esijongeka sikhulu ngentsimbi yentsimbi egqobhoziweyo izitulo zentsimbi kunye nezibane zala maxesha.
Eli khitshi lidibanisa ikhitshi encinci emile njengo-L kunye neekhabhathi ezimhlophe ezinesikhanyisi se-mocha esigqibeleleyo esiqithi. Isiqithi sasekhitshini sisebenzisa igranite engwevu ngelixa izixhobo zokubala eziphambili zisebenzisa i-granite emnyama umahluko owongeziweyo. Ukongeza ubume obuninzi ngaphandle kokuphikisana nembonakalo yayo yanamhlanje, iithayile zegrey ceramic ezinoyilo lobugcisa zazisetyenziselwa ukubuyela umva kwayo.
Ikhitshi yanamhlanje ibonakaliswa kukucoceka, ukuhonjiswa okungahlobenanga. Iphantse yafana nesitayile sangoku esisebenzisa indawo ethe tyaba yekhabhinethi ngaphandle kokuhombisa kunye noyilo olucekeceke. Akukho mizobo intsonkothileyo, ubumba bokuhombisa okanye iinkcukacha kodwa endaweni yoko icacile kwaye ilula. Uhlobo lwangoku lwekhitshi lukwajolisa ngakumbi kwiifom zejiyometri ukusuka kwifom ye-angular elula ukuya kumagophe anesibindi.
Iikhabhathi zekhitshi zale mihla zidibanisa izinto ezahlukeneyo ezinje ngee laminates zoxinzelelo oluphezulu, ii-veneers okanye iglasi, ngokungafaniyo nesimbo sendabuko esibonisa uhlobo olunye lomthi kulo lonke. Kwiikhitshi zanamhlanje ezineekhabhathi ezimhlophe, i-vibe ye-ultra yanamhlanje ifezekiswa ngokusebenzisa ukugqitywa okuphezulu kokuqaqambisa ukugxininisa umphezulu omdaka.
Indawo yokugcina ngokuqinisekileyo yandiswa kolu loyilo lwekhitshi, kunye nokugcinwa okumgangatho ophezulu ukuya phezulu kunye nelaminates emhlophe emenyezelayo. Ukongeza umahluko ocekeceke kukukhanya okumpunga okuqinileyo okusetyenziswa kwisiqithi sasekhitshini, ngelixa iithayile zeceramic ezizodwa ezinepateni engwevu ethe tyaba ibekwe kwipateni ye-chevron, yongeza uyilo olwahlukileyo kumgangatho.
Le yikhitshi entle yanamhlanje esebenzisa imibala ethambileyo efihlakeleyo, edala ukufudumala nokucoceka ngaphezulu- konke ukuziva kwisithuba. Iikhabhathi zekhitshi zine-laminates emhlophe ecwebezelayo kunye ne-U-channel yealuminium yokutsala ukujonga okucocekileyo, okungenamthungo. Imigangatho inemigangatho emihle yemithi, kwaye ukukhanya okumhlophe okufudumeleyo kunika ikhitshi ukukhanya okufudumeleyo.
Esi sithuba sekhitshi sanamhlanje sijongeka siqaqambile kwaye siphakathi kunye nesitayile sayo esincinci kunye neendawo zangoku, ezicocekileyo. Ikhitshi likhangeleka lingenamthungo njengoko lisebenzisa iikhabhathi ezisezantsi ezinamabala amhlophe kwaye zinomhlaba ococekileyo ococekileyo. Ukongeza ukongeza ngakumbi ukuthungwa, i-backsplash isebenzisa iithayile ezizodwa ze-3D kunye nephethini ye-wavy, eqhubeka ngakumbi nokusetyenziswa kokukhanyisa kwekhabhinethi.
Le khitshi yanamhlanje eqaqambileyo inekhabhathi emhlophe yeplanethi enesikimu sombala we-achromatic. Umgangatho ngumthi we-ebony, ngelixa zonke iindonga, isilingi kunye neekhabhinethi zekhitshi zisemhlophe zenze umahluko ogqwesileyo. Izinto ezisetyenziswayo zisetafileni zisebenzisa igranite emnyama, yongeza indawo entle eqaqambileyo ekhitshini.
Ubuhle bokuba nekhabhathi emhlophe yekhitshi kukuba ukuxuba kunye nokuthelekisa imibala yeendonga zakho, isilingi, i-flooring, i-backsplash kunye nezinto zokubala ziphantsi kwezinto zakho ezixhalabisayo. Umhlophe ngumbala wobungqina osilelayo ohamba kakuhle phantse kuyo nantoni na. Inokuhambelana okukhulu kunye nawo nawuphi na umbala wombala, nokuba kungaba yindawo epholileyo, ithoni efudumeleyo okanye ukungathathi cala. Yicinge njenge-canvass engenanto ekuvumela ukuba usebenzise ngokukhululekileyo nantoni na oyithandayo ngokusekwe kukhetho lwakho kunye nesitayile esahlukileyo.
Umntu akanakuze ahambe gwenxa ngeekhabhathi ezimhlophe ngenxa yokuba iklasikhi kwaye zithathwa njengezingapheliyo. Kwaye ukuba ufuna ukutshintsha imo yekhitshi lakho, unokwenza ngokulula ngokupenda iindonga zakho ngombala owahlukileyo kwaye ulungelelanise izixhobo zakho kancinci. Ukukhetha umbala ofanelekileyo oza kuhamba nekhabhathi yakho emhlophe ekhitshini kuya kuxhomekeka kakhulu kwinkangeleko ofuna ukuyiphumeza kunye nesimbo esikhoyo ekhitshini lakho.
Ngokukhetha okungapheliyo kwemibala kunye noyilo olukhulu olunokuthi lubonelele, ukuhlanganisa umbala olungileyo wokuhamba nekhabhathi emhlophe yekhitshi kunokudideka. Kungenxa yokuba ungonwaba kakhulu usazi ukuba zonke iinketho zinokusebenza. Apha ngezantsi sinciphise ezinye zezinto onokukhetha kuzo kunye nezikhokelo ezithile malunga nendlela onokuvelisa ngayo umbala omangalisayo wombala wekhabhathi yakho emhlophe.
Ukudibanisa okanye umahluko
Ngalo naluphi na uhlobo lweprojekthi, ukuqulunqa iskimu sakho sombala kuqala ngale nyathelo lilula. Xa ukhetha umbala wepeyinti ofanelekileyo ukuze utshatise ikhabhinethi yakho yasekhitshini, kuya kufuneka ucinge ngeyona nto iphambili kubuhle ofuna ukugqama- ngaba ufuna ukufezekisa umahluko okanye ukuvumelana? Zombini izinto zivelisa uhlobo olwahlukileyo lokujonga kwaye zinika uphawu olwahlukileyo. Isigqibo sixhomekeke kukhetho lwakho kunye nokhetho kwisitayile.
Yintoni umahluko? Umahluko yinto ephambili kuyilo loyilo. Yongeza ubunzulu kwisithuba, yenza ubukhulu kunye nokwahluka, okwenza ukuba ingaphakathi libonakale linomdla, libetha kwaye linomtsalane. Ngokwesiqhelo, umahluko uyaphunyezwa kwizikimu zangaphakathi ngokuthatha imibala emibini eyahlukileyo kwivili lemibala. Nangona kunjalo, umhlophe awukho kwivili lombala. Oku ikakhulu kungenxa yokuba umhlophe ngokwenyani ngumdibaniso wayo yonke imibala. Ngokubanzi, umnyama ubonwa njengombala ochaseneyo omhlophe. Ngalo naluphi na uphawu loyilo olumhlophe ngombala, umahluko unokwaziswa ngeendlela ezahlukeneyo, nokuba kungaphaya kweepateni, utshintsho kulwakhiwo okanye ngokusebenzisa nje nawuphi na umbala ovela kwivili lemibala.
Ukwenza umahluko kwiikhabhathi ezimhlophe, ungasebenzisa imibala eqinileyo okanye enzulu. Imibala eqaqambileyo necacileyo enje ngombala obomvu, o-orenji, oluhlaza okanye oluhlaza okwesibhakabhaka usebenza kakuhle ngaphakathi nangaphakathi, ngelixa imibala etyebileyo efana ne-burgundy, imaroon, ihlathi eliluhlaza okanye i-navy zezona zilungele iikhitshi eziphefumlelweyo nezesiko. Ewe kunjalo, unokuyidlala kancinci ukuze ufezekise isixa sobunzima obungaphaya kwamandla kunye nokufezekisa ibhalansi yombala wakho wombala. Ngenye indlela, unokukhetha i-shades ethuleyo ukuba ufuna ukwenza imibala ibonakale ithambile.
Imibala eyahlukileyo ikongeza umbala wombala owenza ukuba indawo leyo iphume okanye ivuselele imeko yendawo. Umzekelo, umbala okhanyayo otyheli odongeni unokwenza ikhitshi lakho ukuba lifudumale kwaye likhazimle xa longeziwe kwiikhabhathi ezimhlophe zekhitshi.
Iithowuni zemibala, iMithunzi kunye neeThintshi
Kubalulekile ukuba wazi iziseko ezimbalwa zombala xa ukhetha umbala wodonga olungileyo ukuze utshatise iikhabhathi zakho ezimhlophe zasekhitshini. Ngamanye amaxesha umbala ucaba nje kwaye awuziva ulungile xa usetyenziswa kwiindonga zakho. Nangona kunjalo, le mibala inokuhlengahlengiswa ibe ziithinti, iisheyidi okanye iithoni ukuvelisa indibaniselwano yemibala enomdla ngakumbi. Ukudibanisa iithinti, iisheyiti okanye iithoni kunye neekhabhathi ezimhlophe zivelisa umbala odibeneyo.
Iimpawu zenziwe xa umhlophe wongezwa kwi-hue ukuze uyenze lula. Le mibala ihlala ibizwa ngokuba yimibala ye-pastel. Xa kuthelekiswa neminye imibala, ii-tints zenza ukubukeka okuthambileyo, ukuziva kukhaphukhaphu kunye noyilo lokuthambisa ngakumbi. Imizekelo yeetintshi zimthubi ophuzi, grey opholileyo, lavender, luhlaza okwesibhakabhaka kunye neminti. Le mibala idibeneyo inokudityaniswa nekhabhathi emhlophe ukuba isitayile sekhitshi lakho liyilo elinomtsalane lendlu ephefumlelweyo, indlu efama yelizwe eqaqambileyo okanye ikhitshi elingaselunxwemeni. Umzekelo wokudityaniswa kombala olungileyo usebenzisa iikhabhathi ezimhlophe kunye nombala wodonga we-tint ziikhabhathi ze-beige ezenziwe ngeplanga ezibhangqwe ngeendonga ze-pastel eziluhlaza kunye ne-countertop yeplanga eqinileyo.
Imithunzi, kwelinye icala, yimibala eyongezwa ngombala omnyama. Imibala inokuba yinto nje emnyama kwaye ayinyanzelekanga ukuba ibe mnyama kakhulu ukuze ithathelwe ingqalelo njengomthunzi. Le mibala ichasene namabala kwaye ivelisa ukuziva okunothile kunye nobunzima. Imizekelo yee-shades yi-navy blue, iplamu, itial, moss green, iwayini ebomvu, i-sienna, i-rust kunye namalahle angwevu.
Xa isetyenziselwa izinto zangaphakathi, le mibala inika umahluko kunye nesicatshulwa, kodwa ayiphambuki kuhlobo lwendawo. Imithunzi inokusetyenziswa njengemibala yodonga emakhitshini enempembelelo yeklasikhi okanye isitayile sendabuko njengezindlu zembali, ilizwe lakudala okanye iikhitshi zelizwe. Umzekelo wokudityaniswa kombala olungileyo usebenzisa iikhabhathi ezimhlophe kunye nombala wodonga emhlophe ziikhabhathi ezimhlophe ezi-shaker ezidityaniswe neendonga ze-navy eziluhlaza kunye nomphambili wecwecwe elimhlophe lomkhenkce.
Iithowuni zenziwa ngokudibanisa umbala kunye nomhlophe kunye nomnyama okanye ngokuwuxuba ngwevu. Oku kubenza bathotyelwe ngakumbi, ubuqili kunye nokuthula. Uninzi lwembala lwenziwe ngokusetyenziswa kweetoni. Ngokusisiseko nawuphi na umbala onokufumaneka kumacandelo ahlukeneyo ombala abonwa njengeetoni. Le mibala ibonelela ngesibheno esithandekayo kwaye inegalelo nje kwinqanaba elifanelekileyo lobungakanani kwangaphakathi. Imizekelo yeethoni luhlaza oluhlaza, i-taupe, isileyiti luhlaza okwesibhakabhaka, i-mauve kunye neamethiste. Iitoni zinokusetyenziswa njengemibala yodonga ekhitshini enesitayile sangoku. Iitoni zikwanokuguquguquka kwaye zinokusetyenziselwa ezinye iindlela zekhitshi, nokuba zinokuba zezesintu okanye zangoku. Umzekelo wokudityaniswa kombala olungileyo usebenzisa iikhabhathi ezimhlophe kunye nombala wodonga lwethoni ziikhabhathi ezimhlophe zelinen ezibengezelayo ezibhangqwe ngodonga lwe-taupe kunye nomphambili weetan granite.
Yintoni ukudibanisa? Ukudibanisa kufezekisa umbala wombala ohambelana. Ukufumana le mpembelelo ngaphakathi, ukulungiswa kwemibala kunokusetyenziswa. Ukulungelelanisa imibala kunokunyusa imibala esele ixhaphakile kwisikimu sakho. Ngokwesiqhelo kwiikhabhathi ezimhlophe, indibaniselwano yemibala ehambelanayo inokufezekiswa ngokusetyenziswa kwemibala engathathi hlangothi.
Ngokwenkcazo, imibala engathathi hlangothi yimibala engafumanekiyo kwivili lemibala njengombala omnyama, umbala ongwevu nomdaka. Imhlophe ikwangumbala ongathathi hlangothi. Ukupeyinta iindonga zakho ngemibala engathathi hlangothi yenye yeendlela ezikhuselekileyo onokuzihlola. Imibala engathath'icala ayinzima emehlweni kwaye xa idityaniswe nombala okhanyayo wombala wekhabhathi, ayikhuphisani kunye nezinye izinto kunye nokugqitywa kwisithuba.
Ubumdaka obukhanyayo zii-beige zezinye zeyona mibala ithandwayo yokupeyinta ekhitshini yeekhabhathi ezimhlophe. Ipeyinti yodonga, isanti kunye ne-mocha zisebenza kakuhle neekhabhathi ezimhlophe zekhitshi kuba zazisa ilizwi eliphantsi elifudumeleyo. Ukongeza kuloo nto indibaniselwano emhlophe nomdaka inobungqongqo bendalo kuyo, isenza amakhitshi okanye naziphi na izithuba zimeme kwaye zisamkele. Umdibaniso wombala uhlala usetyenziswa kwiikhitshi eziphefumlelweyo ze-rustic, isitayile sotshintsho okanye iikhitshi zangoku.
Ngwevu ngumbala ongathathi hlangothi onokusetyenziswa njengombala wodonga lweekhabhathi ezimhlophe. Umbala ongwevu uthathwa njengeyona ndlela intsha imhlophe. Yeyona nto ifanelekileyo endaweni yabo bafumanisa ukuba yonke imhlophe ibukeka icace gca okanye iyadika. Xa isetyenziswa njengombala waseludongeni wekhitshi, ingwevu yenza isiphumo esimangalisayo kodwa isathotyelwe kwaye ayoyiki. Indibaniselwano yepeyinti engwevu kunye neekhabhathi ezimhlophe zikwabolekisa amandla okuzola ekhitshini.
Ukudityaniswa kweekhabhathi ezimhlophe kunye nombala wepeyinti ongathathi hlangothi kukwabonelela ngokuguquguquka xa kuziwa ekukhetheni izixhobo kunye nezinye iimpahla. Ivumela ukhetho oluninzi, ngokungafaniyo xa ukhetha i-hue ethile njengombala wodonga, ukuhonjiswa kwakho kunqunyelwe.
Inkqubo yemibala yeMonochromatic -Iikimu zombala weMonochromatic zibandakanya umbala omnye kuphela. Izikimu zemibala yemonochromatic zikwasebenzisa indibaniselwano yeethints, iithoni kunye nemibala yelo qela linye lombala. Ukukunika umbono ocacileyo wento eyiyo, igumbi lokulala elineendonga eziluhlaza ezingumgubo, ifanitshala eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nokulungelelanisa izixhobo eziluhlaza kuthathwa njengephalethi emfutshane.
Imhlophe yenye yemibala ethandwa kakhulu esetyenziselwa izikimu ze-monochromatic. Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, umhlophe ayingombala ocacileyo kwaye uyadika. I-White ayizi kumthunzi othile kuphela. Kuthatha iindlela ezininzi, ukusukela kwelona gumbi likhanyayo limhlophe ukuya kwiithowuni ezinamakhrimy e-beige, ukuya kwiitayile ezipholileyo ezinombala oluhlaza okwesibhakabhaka okanye otyheli. Ezi shades kunye neetoni zinokudityaniswa zivelise yonke imibala emhlophe ekhitshini yombala enomdla kwaye ingenabala.
Ikhitshi elimhlophe likhangeleka licocekile, licolile kwaye linomoya. Inombala oqaqambileyo owenza ukuba izithuba zibonakale zinkulu. Nangona ihlala isetyenziselwa izinto zangaphakathi zanamhlanje kunye nezincinci, yonke imilo emhlophe enokusetyenziswa kwizithuba zesitayile kunye nezesiko ngokunjalo.
Eminye imibala emhlophe enokudityaniswa nekhabhathi emhlophe yi-beige, i-ivory, ikhephu, i-ghost emhlophe, i-shell emhlophe emhlophe, i-floral emhlophe, imhlophe, i-ecru, iperile, i-alabaster, iqabaka elimhlophe kunye nekhrim. Umzekelo olungileyo kuyo yonke ikhitshi emhlophe kukubhangqa iikhabhathi ezimhlophe ezixineneyo nodonga lwe-beige kunye ne-countertop yemarble etyebileyo. Oku kuyakuvelisa ikhitshi elinobunewunewu elihle kwaye elinobunkunkqele.
Ingcebiso yoMyili xa ukhetha imibala yepeyinti ekhitshini efanelekileyo yeekhabhathi zakho ezimhlophe . Kwiikhitshi ezincinci, ncamathela kumbala wodonga okhanyayo njengoko zihlala zenza izithuba zibukeke zikhulu. Sebenzisa umbala omnyama kwisithuba esincinci ngamanye amaxesha kunokwenza ukuba uzive unzima kwaye ungqine. Kwakhona, ukuba ufuna ukujonga konke okumhlophe, khetha i-countertop eneenkozo, imithambo okanye imithambo ukunqanda ukuziva ungathandekiyo.
Olu luyilo luqaqambileyo luhlaziyayo lwekhitshi lubonisa indibaniselwano yeekhabhathi ezimhlophe zekhitshi ezimhlophe kunye neziseko zegrey eziseziqithi zekhitshi. Inkangeleko yesiphumo yeyangoku kwaye iyahlaziya, ide yenziwa umdla nangakumbi ngokusetyenziswa kweethayile zangaphantsi kweglasi, kunye neentsimbi zentsimbi ezihonjisiweyo.
Ukuguquguquka kweekhabhathi ezimhlophe zasekhitshini kunika amathuba okuyila okungapheliyo xa kufikwa ekukhetheni izinto ezilungileyo zokubuyela umva. Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zisebenzela nasiphi na isitayile sasekhitshini kwaye lukhetho oluqhelekileyo xa kufikwa kuyilo lwekhitshi yiyo loo nto zilungele inani lezinto zokubuyela umva.
Ukukhetha izinto zokubuyela umva kwiikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini akukho kwahluka ekukhetheni imibala yepeyinti yokutshatisa neekhabhathi ezimhlophe zekhitshi, ezilandela indlela efanayo yoyilo ebandakanya ukudibanisa okanye ukungafani. Unokwenza umahluko ngokusebenzisa izinto zokubuyela umva ngombala omnyama, ngelixa ukhetha umxube ohambelana ngakumbi, ungaya ngombala okhanyayo we-backsplash. Ngenye indlela, ungasebenzisa kwakhona i-backsplash emhlophe ekhitshini ukufezekisa ukucoceka kokubukeka okumhlophe, kodwa ngokwenza njalo, zama ukwazisa umahluko kubume kunye nepateni yokuvelisa isiphumo esimangalisayo.
Indlela eqhelekileyo yoyilo lweendlela zangoku zasekhitshini iyaxubeka, njengoko uninzi lwabanini makhaya luhlala luhamba nezinto ezingasekelwanga zombala weplsplash ukuya neekhabhathi zekhitshi ezimhlophe. Nazi izinto zokubuyela umva kunye neengcebiso kunye nezimvo zokukunceda ukhethe eyona ndlela iza kusebenza neekhabhathi zakho ezimhlophe zasekhitshini:
Iithayile zangaphantsi -Iitayile zangaphantsi zincinci iithayile zeceramic ezixandekileyo zixhomekeke kwii-intshi ezi-3 nge-intshi ezi-6 ubukhulu kwaye ngombala omhlophe. Abanini bamakhaya bathanda iithayile zendlela engaphantsi kwembonakalo yabo yeklasikhi kunye neemfuno zokugcina eziphantsi. Xa idityaniswe nekhabhathi emhlophe yasekhitshini, ivelisa ukucoceka okungafunekiyo kunye nokungaxinani okusebenza kakuhle koyilo oluncinci.
Iithayile zendlela engaphantsi komhlaba zikwanazo nezinto zokubuyela umva ngokugqibeleleyo ekhitshini zesitayile sanamhlanje njengoko zenza ukubukeka okumnandi kwaye zinika ingxelo elula edibanisa ngokudibeneyo noseto lwangoku. Xa ubhangqiwe ngeekhabhathi ezimhlophe ezimenyezelayo, i-backsplash yetreyini yangaphantsi ivelisa imeko yokuqhubeka kunye notshintsho olugudileyo.
Kuba iithayile zendlela engaphantsi komhlaba yenye yezona zinto zihamba phambili ekhitshini yokubuyisela umva ekhitshini, abavelisi ngoku bazama ukuzivelisa ngobukhulu obukhulu njengeesentimitha ezi-3 nge-intshi ezi-9 kunye nee-intshi ezi-4 nge-intshi ezi-12. Iithayile ezinkulu zangaphantsi zisebenza kakuhle ngokukodwa kwiikhitshi ezincinci ezineekhabhathi ezimhlophe kuba zenza umbono ongekhoyo wendawo eyongeziweyo.
Iithayile zikaMoses Iithayile zikaMoses ziithayile ezincinci ezihlala zii-intshi ezi-2 okanye iisentimitha ezi-5 ngokobukhulu. Ihlala yenziwe ngeglasi, i-porcelain okanye i-ceramic. Iithayile zikaMoses zihlala zinesikwere okanye zixande kwaye zihlala zifumaneka ngokulula kwiivenkile zokuphucula ikhaya. Ziza ngemibala eyahlukeneyo, ubukhulu kunye nokugqitywa. Ububanzi obubanzi bemibala enikezelwa ziithayile zemosaic mhlawumbi zingenakubalwa, ezenza ukudibanisa kunye nokudityaniswa okungasikelwanga mda kwaye kwahlukile nako. Unokwenza uyilo olubuyela umva olwahlukileyo. (yongeza ukugqiba, imibala, njl, njl.)
Olona ncedo luphambili lokusebenzisa iithayile zemibala kwiikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini kukuba inika umdla obonakalayo ekhitshini lakho. Ngaphandle kwalonto inika iyantlukwano ngokwembonakalo kunye nombala. Nokuba ungasetyenziselwa ntoni ukudibanisa okanye ipateni, i-mosaic tile backsplash ngokuqinisekileyo iya kutsala umdla kwiindwendwe ngokwenza indawo egxile kwindawo.
Xa zidityaniswe nekhabhathi emhlophe, iithayile ezimnyama zemibala, ezinjengezo zinombala omnyama, zibonelela ngokwahlukileyo okunokusetyenziselwa izinto zangaphakathi zangoku. Iithayile ezinemibala enemibala yomhlaba ezinemibala ebomvu zingasetyenziselwa ukwazisa ubushushu ekhitshini lakho ngeekhabhathi ezimhlophe. Le ndibaniselwano inokusetyenziselwa imeko yangoku, yotshintsho kunye nakwangaphakathi.
Eminye imibono yoyilo lwe-mosaic tile backsplash ziikhabhathi eziphezulu ezibengezelwe ngombala omnyama, ongwevu, omhlophe kunye nobomvu kwiitayile zangaphakathi zekhitshi kunye ne-vibe yanamhlanje. Omnye umzekelo uya kuba neekhabhathi ezixinzelelweyo zebhanti ezibhangqwe ngumbala wendalo wamatye abomdaka, beige kunye nefudumeleyo yeterracotta ephantsi kwekhitshi ephefumlelweyo.
Iithayile -Iithayile zeCeramic yenye yezona zinto zixhaphakileyo kwizinto zokubuyela umva. Isetyenziswa ngokuxhaphakileyo ngenxa yobuhle bayo kunye nezibonelelo ezibonakalayo. Indawo yeethayile kulula ukuyicoca, yomelele kwaye kulula ukuyifaka. Xa kuziwa kuyilo, iithayile zibonelela ngokukhetha okukhulu njengoko zifumaneka kububanzi bemibala kunye noluhlu olubanzi lweepateni. Inokuba yiceramic okanye i-porcelain, ipolishiwe, iphantse yalungiswa okanye yaqaqanjelwa ekugqibeleni.
Ukuba ukhetha iskimu sombala we-monochromatic ekhitshini lakho, iithayile zinokusebenza kakuhle njengesixhobo sokubuyela umva kwikhabhathi emhlophe yekhitshi kuba ikwabonelela ngokwahluka kobume. Khetha iithayile ezimhlophe ezinoluvo olwahlukileyo ukwenza umahluko kwaye wenze iphalethi yasekhitshini ukuba ingathandeki.
Kwiikhitshi zale mihla, indibaniselwano emnyama kunye emhlophe yakudala nayo inokuphononongwa. Oku kubhangiswa kubonakalisa umahluko ocacileyo omhle kwaye unokuma kuvavanyo lwexesha. Umzekelo, zama ukudibanisa ikhabhathi emhlophe ye-satin kunye neethayile eziphezulu ze-ceramic zelikhitshi eline-vibe yangoku.
Ilitye lendalo -Ngaphandle kwegranite, kukwakho nezinye iindlela zamatye endalo ezinokujongwa njengezinto zokubuyela umva. I-Marble, i-travertine kunye ne-slate ziphakathi kweminye imizekelo yayo. I-Marble luhlobo lwelitye lendalo elibonakaliswa yipateni yayo etyebileyo yokubumba kunye nomphezulu ogudileyo.
Ngokuqhelekileyo isetyenziswe njengempahla ye-countertop, i-marble isebenza kakuhle njengezixhobo zokubuyela emuva kwiikhikhini eziphefumlelweyo zendabuko. Ukuba ujonge umncinci kodwa ujonge iklasi ngokubanzi ekhitshini, ke le yinto efanelekileyo kuwe. Isebenza kakuhle njengesixhobo sokubuyela umva kwiikhabhathi ezimhlophe njengoko isongeza umnxeba obutofotofo nakwiindawo ezincinci zamakhitshi.
Eyona nto ibhangqwe kakuhle ziikhabhathi ezimhlophe ezingacacanga kuba ubulula abukhuphisani nobuhle bendalo bemabhile. Nangona kunjalo, i-marble backsplash inokudityaniswa kunye nekhitshi elinobugcisa beekhitshi zokuziva zizityebi.
Isilayiti lolunye uhlobo lwelitye lendalo elibonakaliswa ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza, ongwevu kunye nomhlwa. Zizinto ezibonakalayo zokubuyela umva ukuba ufuna ukongeza ubushushu kunye nokuthungwa ekhitshini lakho. Ihlala isetyenziselwa i-rustic ephefumlelweyo, eyasekhaya kunye neyasendulo iikhitshi zesitayile sehlabathi. I-backsplash ye-slate ibhangqwe ngeyona ndlela ibaluleke kakhulu kwiikhabhathi ezimhlophe ze-antique okanye ukucima iikhabhathi ezimhlophe ezinobumba kunye neenkcukacha zepaneli.
I-Travertine lolunye uhlobo lwelitye lendalo elenziwe ngelitye lekalika kwaye ihlala imhlophe okanye umbala okhanyayo. Inezandi eziphantsi zokufudumala ezinombala omdaka okanye umbala okhanyayo ngombala.
Ukuba awufuni umbala wesilayidi kodwa njengobuhle obahlukileyo belitye lendalo, i-travertine backsplash yenye yezinto onokuzihlola. Inika ukufudumala, umbala ocacileyo ocacileyo kunye nehlabathi elidala kwikhitshi lakho. Njenge-slate, i-travertine backsplash isetyenziselwa i-rustic ephefumlelweyo, yendabuko, i-antique kunye nekhitshi yelizwe. I-travertine backsplash nayo ibhangqwe kakuhle kunye nekhabhathi emhlophe ye-antique okanye icime iikhabhathi ezimhlophe ezinobumba kunye neenkcukacha zepaneli.
Iglasi -Iglasi ithathwa njengeyinto yokubuyela umva ekhitshini. Ifom yeglasi eyaziwa ngokuba yiklasi yengubo yegraphic okanye iglasi epeyintiweyo ngasemva lolona hlobo luqhelekileyo lweglasi esetyenziselwa esi sicelo.
Ngaphandle kokugcinwa okuphantsi, iglasi yaziwa ngokuba yinto yokubuyela umva ngenxa yokhetho olungapheliyo olunikezelayo. Iza ngemibala eyahlukeneyo kunye noburhabaxa obongeza ubuhle obubonakalayo ekhitshini lakho. Ixhaphake kakhulu kuseto lwangoku kunye nolwanamhlanje njengoko ukubukeka kwayo okuthe tye kunye nokukhanya okuthe tye kukugqibelela koyilo oluncinci.
I-backsplash yeglasi enemibala eqaqambileyo ingasetyenziselwa ukugxininisa kwikhabhinethi emhlophe ekhitshini. Oku kudityaniswa kongeza umnxeba wangoku kunye nokungafani okuthe ngqo kwi-retro, yangoku okanye yoyilo lwangoku lwekhitshi.
Nazi ezinye iingcebiso ezongezelelweyo onokuzigcina engqondweni xa ukhetha i-backsplash efanelekileyo ukuba uhambe nekhabhathi emhlophe yekhitshi:
Jonga imibala yezixhobo zakho zokubuyela umva . Ukuthetha ngokubanzi, nawuphi na umbala wezinto zokubuyela umva unokusebenzela iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini. Ukhetho lwakho luya kuxhomekeka kakhulu kwinkangeleko yonke ofuna ukuyifeza kunye nesitayile oya kuso ekhitshini. Ngokwesiqhelo, abantu basetyenziselwa umbala ongathathi hlangothi wokubuyela umva, njengamhlophe, cream, beige, off white, shades of brown or grey, kodwa kungenjalo, ungazama ngakumbi xa kuziwa kukhetho lwakho lombala. I-backsplash yindlela efanelekileyo yokwazisa umbala ocacileyo weskimu sakho. Ukuqaqamba ngombala kunokwenza ukuba ikhitshi lakho libe nobomi kwaye likhanye ngakumbi.
Kwakhona, gcinani engqondweni ukuba imibala ingasetyenziselwa ukubonisa iimowudi ezahlukeneyo kuseto lwakho lwekhitshi. Ukuhambisa, ubunewunewu okanye into esesikweni, yiya kwi-backsplash enemibala engaphantsi kwegrey okanye emnyama. Ukuba ufuna ukongeza i-airy uziva ekhitshini lakho kodwa ufuna ukuphambuka kuyo yonke iphalethi emhlophe ekhitshini, ungasebenzisa i-backsplash ekhanyayo enombala ofana nqwa nomthunzi oluhlaza okwesibhakabhaka ogqamileyo onee-accents zetal okanye umthubi mellow oluhlaza. Ukuba ufuna ukwenza amandla kwaye wenze ikhitshi lakho limeme ngakumbi, zama i-backsplash ebomvu eqaqambileyo kwiikhabhathi zakho zasekhitshini. Kwakhona unokuncamathela kumbala omnye okanye uvelise imibala eyahlukileyo enokwenza ikhitshi lakho libukeke ngakumbi kwaye libe lolunye uhlobo.
Jonga ukusika okwahlukeneyo kunye nokubekwa kwezinto zakho zokubuyela umva . Ungahlala ubeke endaweni yokubuyela umva ngokucacileyo kunye nokutshintsha okutsha ngokujonga iipateni ezahlukeneyo kunye nokubekwa ekhitshini lakho. Ngokwesiqhelo, ikhitshi yesiko ivula ubeko lweplastiki ngokulinganayo kunye neepateni, nangona kunjalo ukuba ufuna ukuthatha uyilo lwakho luphakame kakhulu, zama ukuzama ipateni enje ngoyilo lwe-chevron, ipateni yedayimani, imitya, njlnjl. kuseto lwangoku kunye nolwanamhlanje, unokukhetha ukuba ithayile yakho okanye ilitye lendalo libuyiselwe isiko ukuze wenze ubeko olwahlukileyo.
Yazisa iipateni ekhitshini lakho usebenzisa izinto zakho zokubuyela umva . Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini yindawo yangasemva efanelekileyo yokuhlenga-hlengisa ngokomzekelo kuba akhuphisani nembonakalo exakekileyo yeethayile eziprintiweyo okanye iipateni ezinesibindi. Kwakhona, iikhabhathi ezimhlophe zisebenza ngokufanelekileyo ekuqaqambiseni ubuhle beeplasplashes ezingumzekelo.
Inkqubo yoyilo lwangoku loyilo lwe-backsplash ziithayile zemizobo kwiiprinta ezahlukeneyo okanye iipateni zejometri. Ukuba ufuna ukwenza ingxelo kwaye wenze i-backsplash yakho ibe yindawo ekujoliswe kuyo ekhitshini lakho, khetha iithayile zeceramic ezinoprinta olwahlukileyo. Ukuprinta akufuneki ukuba kubhalwe ngqindilili ukwenza ingxelo emangazayo ngeekhabhathi ezimhlophe zekhitshi. Iithayile ezimhlophe ezinemizobo emhlophe ebonakalayo nayo inomdla ngokubonakalayo. Zongeza isixa esikhulu somahluko ngokweendlela ezenziwe ngayo kwaye zisebenza ngokukodwa kwiikhitshi eziphefumlelweyo zangoku nezexesha langoku.
Iinkcukacha kunye nezixhobo nazo zibalulekile ngokulinganayo xa kuziwa ekuveliseni uyilo olulungeleleneyo noludibeneyo. Izixhobo zekhabhinethi ezinjengezibambo, ukutsala kunye neenqanawa zithathwa njengezacholo zekhitshi. Zibalulekile emakhitshini kungekuphela ngenxa yokusebenza kwazo kodwa nangenxa yobuhle obongezayo kuyilo lwekhitshi.
Izixhobo zeKhabinethi zikhusela iikhabhathi zakho kuthuli oluvela eminweni yakho kwaye ziyakunceda uvule okanye uvale iingcango ngokulula. Xa kuziwa kwi-aesthetics, i-hardware yekhabethe efanelekileyo inokuphinda ijonge ukubonakala kobuso bakho bekhabhinethi. Izixhobo zeKhabinethi ziyafumaneka ngeendlela ezininzi kunye nokugqitywa okunokusetyenziselwa ukugqiba ukujonga okupheleleyo kwayo nayiphi na ikhitshi.
Ngaphandle kweprofayili, imilo kunye nobungakanani, umbala kunye nokugqitywa kwekhompyuter yentsimbi yenye yezinto umntu anokuthatha isigqibo kuzo xa ukhetha i-hardware efanelekileyo yekhabinethi yekhitshi lakho. Ukugqitywa okuqhelekileyo kwezixhobo zekhabethe kukugqitywa kwe-nickel, ukugqitywa kwe-satin, ukugqitywa kwe-chrome, i-antique pewter, ubhedu olukhanyayo okanye ubhedu obumnyama, ubhedu, i-bronze ye-rubbed, i-aluminium, i-matte emnyama, i-rust, iglasi ecacileyo, ukugqitywa komthi okanye umhlophe.
Nangona kungekho mthetho jikelele ekukhetheni umbala ofanelekileyo wekhompyuter yehardware ukuze utshatise, indlela enye yokusilela kukhetho kukukhetha uhlobo lombala wekhabhathi yentsimbi kunye nokugqiba ngokuxhomekeka ikakhulu kwisitayile esikhoyo ekhitshini lakho.
Uninzi lwabanini bamakhaya ludla ngokutshatisa zonke izinto ezigqityiweyo ekhitshini labo. Nangona kunjalo, unokuzama ukudibanisa kunye nokudibanisa izinto ngokwahlukileyo ukwenza uyilo olunomdla ngakumbi. Akukho sidingo sokutshatisa zonke izinto ezigqityiweyo kwaye nompompo wakho awunyanzelekanga ukuba ubenjalo kodwa qiniseka ukuba bayancedisana.
Enye indlela yokukhetha izixhobo zekhabhathi ezifanelekileyo zokuhamba nekhabhathi emhlophe yekhitshi kukulungelelanisa ukugqitywa kunye nombala ngezixhobo. Amaqhina amnyama kunye neoyile exutywe i-bronze inokutshatiswa nezixhobo ezimnyama ngelixa i-nickel e-brushed okanye i-satin ye-stainless steel pulls ingafaniswa nezixhobo zensimbi ezingenasici.
Owona mbala uthandwayo wekhabhathi yentsimbi okanye i-chrome yokugqiba iikhabhathi zabo zasekhitshini. Isetyenziswe kwizimbo zombini zemveli nezala maxesha, izixhobo zentsimbi ene-brashi ezinokusetyenziswa zinokusetyenziswa kwiikhabhathi zekhitshi ezimhlophe ezenziwe ngamaplanga okanye iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe.
Iikhabhathi ezi-Shaker zeekhitshi zethutyana kunye nezikumgangatho ophefumlelweyo ziyaziwa ngoyilo olulula kunye nemigca ecocekileyo. Iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe ezi shaker zihlala zibhangqiwe kunye nezixhobo ezingafakwanga izixhobo zokuncedisa ukulula kwazo. Oku kubhangiswa kunokusetyenziselwa zombini iikhitshi eziphefumlelweyo okanye zeediliya. Ngenye indlela, iiglasi kunye namaqhina e-ceramic anokusetyenziselwa ukumataniswa nekhabhathi ezimhlophe zohlobo olugungqayo.
Iikhikhini zesitayile sezinto zobugcisa okanye amakhitshi emveli ane-millwork enzima kunye nokubunjwa kwesithsaba zihlala ziboniswa kuyilo lwakudala okanye ilizwe eliphefumlelweyo. Bahlala besebenzisa iikhabhathi ezimhlophe okanye ze-beige okanye iikhabhathi ezigqityiweyo kumhlophe. Ukugqiba indawo yakudala yokuziva ngathi kukho indawo, khetha izixhobo zekhabhinethi zentsimbi. Olunye umbala wekhabhathi yentsimbi okanye ukugqitywa okuhamba kakuhle noyilo lubhedu lwe-antique, i-oyile yokurabha ubhedu kunye nomhlophe oxineneyo.
Kwikhitshi lanamhlanje elinamakhabethe amhlophe amhlophe, khetha izibambo ezinefomula okanye iprofayile ehlengahlengisiweyo. I-Nickel okanye i-stainless steel in brushed, satin okanye i-chrome ekugqibeleni zihlala zibonwa kwiminyango yeplanethi. Ibha yeplati etsala kwisiphelo se-satin esinebrashi sikwasasazeka kwisitayile sangoku iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini.
Kuyo yonke ikhitshi emhlophe, izixhobo zekhabhathi zihlala zisebenza njengenye yeendawo ekugxilwe kuzo kuyilo kuba ziyabonakala. Yeyona ndlela igqibeleleyo yokwazisa umahluko kwiskimu se-monochromatic. Kwiikhitshi zemveli ezineekhabhathi ezimhlophe, yiya kwizixhobo zentsimbi zobhedu okanye izibambo ezimnyama njengoko zinika umahluko oqaqambileyo owenza ukuba indawo yakho ingabi mnandi.
Uyilo oluMhlophe lweKhitshi - Iikhitshi zeCherry Wood - 143 Uyilo lweKhitshi eNtofontofo - Amakhitshi aneziqithi - Uyilo lweKhitshi yesiNtu - Iingcamango ezimnyama zeKhitshi
iindleko zelayisensi yomtshato kwi ga
Umama womtshakazi iinwele phezulu
izimvo zesikhumbuzo somfazi
iintlobo zobeko lwekhitshi